Masvomhu apa anoita seasina kunaka. Muenzaniso uri muvhidhiyo unopa zana nemakumi maviri akanaka, makumi maviri asina kunaka, uye gumi akagadzirisa ongororo dzisina kunaka. Kana ndikaisa nhamba idzodzo mufomula iri pamusoro ndinowana 120 pane 20% sezvakaratidzwa muvhidhiyo.
Wataura chokwadi, ndinoda kugadzirisa chinyorwa ichi. Iyo fomula iri chaizvo V = 7.9 (.62P -.17N² + .15R).
OwO, inonakidza post. Usambofunga kuti kune Calculator inofanotaura Kutengesa paOngororo yepamhepo. Ndatenda neKugovera. Ini ndinoverenga uye mamakisi angu ari: 1620.53%. Ndeapi maonero ako pane zvandinotengesa zvibodzwa?
Wow! Iko kungave kuri kusvetuka uye makorokoto pane ongororo dzako.